@gunapeya - Steem - GoldVoice.club
Morning Though (Chapter 2)
နယ်မြေ အခြေအနေကြောင့် တစီးထဲ မသွားကြဘဲ (၄) စီး သို့မဟုတ် (၅) စီး တဖွဲ့ ဖွဲ့ပြီး သွားကြ၏။ ထိုသို့ အတူ သွား အဖွဲ့ထဲမှ ကား တစီးစီးများ ပျက်လျှင် အဖေသည် မိမိကားကို ရပ်ထားပြီး ထိုသူ၏ ကားကို ကောင်းမွန်သည်အထိ ပြင်ကူလေ့ ရှိ၏။ သူကသာ သူများကို ကူတာပါ။ အဖေ့ကား ပျက်ေ…
Steemit Philippines Street Photography #287 - by Allmonitors
287 - Happy together. We were young ones and I can relate to this photo of two kids enjoying their time while they walk with their old people. If only we can turn back time.😊 Shot in Baguio City, Philippines.
အစား စားရာ သတိပါ
ကျန်းမာ ချမ်းသာ သက်ရှည်ကြာ
Show 3D win SBD/Steem game [UPDATE]| 露三点-送SBD/Steem游戏[消息] - 20190814 (by @ace108)
IMAGE LINK|图片链接: https://www.supload.com/SJG5Lm_4Q
" မပင်ပန်း ဘဲ တရားအားထုတ်နည်း"
အခုမှစပြီး တရားစတင်အားထုတ်နေကြတဲ့ ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ အတွက် အဓိကထားပြီး မိမိတို့ ရဲ့ အခု လက်ရှိ တရားအားထုတ်နေမှုကို အထောက်ကူဖြစ်စေဖို့ မပင်ပန်းဘူး လို့ ထင်ရတဲ့ တရားရှုမှတ်နည်း၊ တရားထိုင်နည်း လေးကို ရေးသားဖေါ်ပြပါရစေ။
ဟိုဘက်ရပ်ကွက်လေးအကြောင်း မပြောရတာတောင် အတော်ကြာခဲ့ပါပြီ ဟိုဘက်ရပ်ကွက်က အားပေးယုံကြည်သူ နည်းတော့ ပြောသာပြောရပါတယ် မျက်နှာ အင်မတန်ငယ်ရပါတယ် လောက်လောက်လားလား ဈေးက မပေါက်သေးတော့လည်း လူတွေ သိပ် အာရုံမရကြပါဘူး ဒါထက်ဆိုးတာကတော့ ဆရာ…
Splinterlands sold 700k BETA packs + Heron's Unlimited service is great.
I have rented out my deck to the Heron's Unlimited service by @tcpolymath.
He foundagood player for me and for about 10 days now the player has been playing my deck.